DEG DEG: Wasiirka Gaashaandhigga oo si cad u sheegay cidda uu amray in la baaro | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii DEG DEG: Wasiirka Gaashaandhigga oo si cad u sheegay cidda uu amray...
DEG DEG: Wasiirka Gaashaandhigga oo si cad u sheegay cidda uu amray in la baaro
Wasiirka ayaa hadalka Taliyaha Ciidanka Badda ku tilmaamay inuu ahaa hadal ka baxsan nidaamka iyo anshaxa uuna u gafay Ra’iisulwasaaraha.
” Haddaba waxaan Ummadda Soomaaliyeed la socodsiinayaa in baaristu ay quseyso oo kaliya sarkaalkaas shacabkana la socon doonaan gunaanadka falka uu ku kacay sarkaalka” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Wasiirka.
Fasiraada cusub ee wasiirka Gaashaadhigga ayaa kusoo aadeys xilli baraha bulshada lagu faafiyey in warqadda wasiirka iyo baarista uu dalbaday ay ka dhan tahay Ra’isulwasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Beledweyne (Caasimada Online) – Janaraal Abuukar Xaaji Warsame (Xuud), oo kasoo horjeeda maamulka HirShabelle, ayaa faah-faahin ka bixiyey dagaal ay ciidankiisa shalay la galeen...
Prof. Cabdi Ismaaciil oo Rooble ku sifeeyey shakhsi uga daraaday Farmaajo
Afar arrimood oo muujinaya inuu Farmaajo wax ka ogyahay kiiska Ikraan.
Sidee ayey mucaaradka uga falceliyeen doorashadii ay ku kala jabeen ee...
+1000 LONDON WALAY Fadlan ku yaaca waa codsi.
Sawirro: Dibad-bax weyn oo ka dhacay HARGEYSA